Bariga Afrika – Page 2 – Dawladnimo News
Home » Wararka » Bariga Afrika (page 2)
November 11, 2018	Comments 677 Views
Islaan Bashiir Islaan Cabdulle ayaa daartiisa Gaalkacyo casumaad iyo qaabilaad ugu sameeyey Musharax Cabdirasaaq Cabdullaahi Jaamac Janagale oo maalinnimadii shalay si weyn loogu soo dhaweeyey gigida diyaaradaha ee Cabdullaahi Yusuf Airport. Musharax Janagale iyo islaan Bashiir ayaa yeeshay kulan sharafeed gaar ah oo albaabadu u xiran yihiin oo qaatay muddo. Musharax Janagale ayaa ka mahad celiyey qaabilaadda Islaanku ugu sameeyey ...
October 31, 2018	Comments 451 Views
Madaxa Xukuumadda Galmudug Shiikh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa sheegay in uu soo dhaweynayo Gogashii Wada hadalka Madaxwayne Farmaajo Sidoo kalane uu Masuuliyad iska saarayo Dib u heshiisiinta Madaxda Dowlada iyo Dowlad Goboleedyada. Qoraal caawa kasoo baxay xafiiska madaxa Xukuumadda Galmudug ayaa lagu sheegay arintaan.
September 25, 2018	Comments 455 Views
Majmaca Culimada Soomaaliyeed ayaa ka hadlay dilkii Foosha xumaa ee 20-kii bishaan loo geystay Ala Ha u Naxariistee Axmed Muqtaar Dowlo oo ahaa Nin Garashle ahaa. Guddoomiyaha Majmaca Culumada Sheekh Bashiir Axmed Salaad oo maanta warbaahinta la hadlay ayaa Dilka Axmed Dowlo ku tilmaamay mid Biniaadanimadda ka baxsan,islamarkaana ka Culimo ahaan ay aad kaga xun yihiin. Waxa uu sheegay in ...
Gudoomiyaha Maxkamadda CQS oo sharaxay sababta ay usoo bateen dilalka Xamar
September 25, 2018	Comments 463 Views
Gudoomiyaha Maxkamadda Ciidamada Qalabka sida ee Soomaaliya Xasan Cali Nuur Shute, ayaa ka hadlay dilalkii ugu dambeeyay ee ka dhacay Muqdisho, iyo sababaha badiyay. Waxa uu sheegay in dilalka ay sababta ay u bateen in ay tahay Ciidamadii loogu talagalay in ay la dagaalamaan Al-shaabab oo howlgalo sameyn lahaa oo Magaaladda gudaheeda lagu soo xareeyay. Sidoo kale waxa uu sheegay ...
Ciidamo ka tirsan NISA oo lagu wareejiyey Booliska Soomaaliyeed
September 25, 2018	Comments 447 Views
Qoraal kasoo baxay Taliska Hay’adda Nabadd Sugidda iyo Sirdoonka Qaranka Soomaaliyeed ayaa lagu sheegay in Hub iyo ciidan lagu wareejiyay Taliska Booliska Soomaaliyeed. Qoraalka oo uu ku saxiixnaa Taliye ku-xigeenka NISA Fahad Yaasiin ayaa lagu sheegay in booliska Lagu wareejiyay ciidamo gaaraya 1,728 askari, 25 gaadiidka dagaalka oo 13 kamid ah ay hubeysan yihiin.
Wasiirkii Deegaanka Puntland oo iscasilay
September 23, 2018	Comments 432 Views
Wasiirkii Deegaanka & Isbedelka Cimilada Maamulka Puntland Dr Cali Cabdullaahi Warsame ayaa saakay si rasmi ah ugu dhawaaqay Is casiladiisa. Sababta ayuu ku sheegay in ay ku fashilmeen Saddex mashruuc oo dhamantood muhiimad u lahaa Shacabka Puntland. Dhanka kale Madaxda Puntland ayuu ku eedeeyay in ay danaha horumarineed ka hormarinayaan dano shaqsiyaad gaar ah oo ay ka leeyihiin ujeedooyin guracan.
September 22, 2018	Comments 405 Views
Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle (Xaaf), ayaa galabta Sagootin u sameeyay Wafdigii ka socday Aqalka sare ee uu hogaaminayay Senator Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid oo maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa Magaalada Dhuusamareeb. Wafdiga intuu ku sugnaa Magaaladda waxay kala hadleen Madaxda Galmudug Khilaafka Galmudug iyo Dowladda Dhexe ee Soomaaliya,waxayna sanataradda ay sheegeen in ay xalin doonaan arrimaha jira. Dhanka kale ...
Suldaan lagu dilay degmada Badhan
September 21, 2018	Comments 479 Views
Suldaan Xasan Cali Jibriil oo ka mid ah isimada dhaqanka ayaa maanta dablay hubeysani toogasho ku dilen, meel u dhow magaaladda Badhane e gobolka Sanaag. Marxuumka ayaa kusii jeeday goob ku taal gudaha magaaladda Baran, oo uu qado sharaf ugu sameeyay madaxweynaha Puntland iyo waftiga la socday. Hoos ka dhagayso waraysi afhayeenka nabadoonada:
Ardeyad Fasalkeedi lagu dhex toogtay Muqdisho
September 21, 2018	Comments 460 Views
Waxaa goordhaweyd lagu dhex toogtay Jaamacadda Soomaaliya gabar kamid ahayd ardayda dhigata Jaamacadda. Waxaa jaamacadda gudaha u galay labo rag ah oo hubeysan, islamarkaana baadi goobayay gabadhaan, ,waxeyna ugu danbeyn ka dhex heleen fasalki ay wax ku baraneysay,ayagoona halkaa ku toogtay. Gabadhaan lagu magacaabi jiray Aamino Xuseen Xasan yaa waxaa lagu dilay faraca ay Jaamacadda Soomaaliya ku leedahay Baar-ubax,waxeyna kamid ...